BizChat: Fifandraisana sy fiaraha-miasa amin'ny ekipa | Martech Zone
BizChat: Fifandraisana sy fiaraha-miasa amin'ny ekipa
Alatsinainy, Jolay 9, 2018 Alatsinainy, Jolay 9, 2018 Douglas Karr
Tany am-piandohana, andro nitombo avo an'ny ExactTarget (Salesforce ankehitriny), fitaovana iray tsy vitan'ny orinasa raha tsy teo dia ny Yahoo! Messenger. Ankoatry ny hafatra voajirika mahatsikaiky matetika izay nandefa fampandrenesana "Niato aho" avy amina mpiasa iray izay namela ny solosainany solosaina hisokatra sy niditra, dia tsy voahaja ny fifandraisana haingana. Mazava ho azy, raha vao nahatratra mpiasa an-jatony izahay, nanjary tsy afaka namboarina ilay fitaovana ary lasa fitaovana voalohany indrindra taminay ny mailaka… saingy nampalahelo tokoa izany.
Nanjary nalaza i Slack taona vitsivitsy lasa izay, ary na dia tian'ireo orinasa sasany aza izany… ny hafa kosa tia koa nitaraina noho ny tsy fandaminana fantsom-pifandraisana iray mety ho lasa mandeha ny fotoana. Minoa ahy, azoko ny fahasosoran'ny rafitra fitantanana tetikasa maro, sehatra fifandraisana maro, ary mailaka. Manana mpanjifa mampiasa Facebook Messenger aho, ny sasany Basecamp, ny hafa Brightpod… ary ny ankamaroan'ny mampiasa mailaka. Ao amin'ny mailako dia manana fitaovana manokana ho an'ny sivana sy laharam-pahamehana aho. Nofy ratsy!
BizChat dia natsangana ho an'ny orinasa hitondra ny fifandraisan'izy ireo sy ny fiaraha-miasa rehetra amin'ny toerana iray voalamina.
BizChat dia rindrambaiko serasera sy fiaraha-miasa eo amin'ny sehatry ny orinasa voaro. Afaka manao chat group ianao ary mizara hafatra mivantana eo amin'ny rahona. Izy io dia rindrambaiko ho an'ny mpampiasa izay mamela anao hizara lahatsoratra manerana ny orinasa, hanao fizarana rakitra na aiza na aiza, na oviana na oviana.
BizChat manana Direktea ho an'ny mpiasa afovoany mahery izay manome anao fidirana amin'ny mpiasa rehetra eo noho eo miaraka amina mpandeha an-tsambo mora foana. Azonao atao ny mamorona sy manome andraikitra mora foana ary manoratra eo am-pandehanana. Azonao atao ny mifamadika avy amin'ny birao mankany amin'ny fitaovana finday ary hitazona ny zavatra rehetra hifandrindra. Ankoatr'izay, izany maimaimpoana hatramin'ny mpampiasa 100.
BizChat manolotra Group Chat, Direct Messaging, Call, Company-wide Post, ary File Sharing amin'ny toerana iray. Ny sehatra dia manamora ny fifandraisan'ny ekipa ary mampiditra fitaovana sy hetsika izay hita ao anatin'ny fifandraisan'orinasa isan'andro. Ny tsara indrindra dia manome ny fotoana ahafahan'ny BizChat manova ny fifanakalozan-dresakao ho hetsika. BizChat dia manolotra endri-javatra tsy mampino amin'ny famoronana sy fanomezana andraikitra mivantana avy amin'ny resadresakao sy ny fanamarihana hafatra izay tianao horesahina any aoriana.
Tags: bizchatfiaraha-miasafifandraisana anatinyfitantanana asaasa
VisCircle: mandrosoa ireo pejin'ny vokatra ecommerce misy 3D Technology